Ny tsiambaratelon'ny SEM: Voaporofo ny valin'ny Google | Martech Zone
Ny tsiambaratelon'ny SEM: Voaporofo ny valin'ny Google
Asabotsy, Jona 20, 2009 Asabotsy, Aprily 16, 2016 Douglas Karr
Nisy namako iray nizara ny valin'ny fidiram-bolany nandritra ny 2 taona lasa tamin'ny Text Link Ads, serivisy ahafahanao mividy sy mivarotra rohy. Ny mpanonta dia mivarotra rohy fotsiny mba hahazoana vola - ary misy ny fotoana mety ahazoana bilaogy miorina miaraka amina mpanaraka sy laharana tsara.
Ho an'ny mpanao dokam-barotra dia ny ampiasao ny backlinks mba hampiakarana ny laharam-pahaizany amin'ny motera fikarohana. Ny algorithm pagerank an'i Google dia mavesatra indrindra amin'ny backlinks, indraindray dia toa tsara kokoa ny filaharana na inona na inona kalitaon'ny atiny ao amin'ny tranokalanao. Ny teôria dia ny fanonta ara-dalàna ireo mpamoaka ara-dalàna manana fifandraisany lehibe… ary miakatra ny laharam-pikarohan'izy ireo.
Betsaka ny mpanao dokam-barotra no marary sy reraky ny miandry ary mandoa vola fotsiny izy ireo hahazoana toerana tsara kokoa. Ny familiana votoaty mahafinaritra be dia be dia be izay mety tsy handoavana am-bolana maro… ny fividianana backlinks dia mety hahazo valiny haingana sy manaitra tokoa.
Ny famoahana rohy mandoa nefa tsy asiana rel = ”nofollow” ao amin'ny tag anao dia fanitsakitsahana ny Fepetran'ny serivisy Google. Google dia manasazy sy manafoana ireo tranonkala nofaritan'izy ireo fa misy rohy mandoa ao amin'izy ireo. Ho an'ny famoahana an-tserasera ara-dalàna, ny fidiram-bola dia mety hanaloka ny vola miditra rehetra azon'i Google Adsense omena.
Ny vola azony tamin'ny 2008 dia efa ho $ 7,000… raha ampitahaina amin'ny $ 1,000 amin'ny Google Adsense. Tsy ratsy.
Raha ny fiheverako ny fanetren-tena, ny orinasam-pivarotana motera fikarohana matotra rehetra izao dia manana programa miverina amin'ny laoniny any am-paosin'izy ireo hanampiana ny vokatra. White hat SEO dia tsy miasa intsony satria i Google dia manjaka ankehitriny miaraka amin'ireo programa backlink be karama mamindra ireo tranonkala manankarena amin'ny valin'ny karoka farany ambony.
Raha ny hevitro, Google dia voafitaka amin'ny ankapobeny.
Ny fandinihana ny lisitry ny toerana itodiana amin'ny rohy naloa azy dia tena mahaliana. Tsy io no spam lehibe ary mahazo vola ankehitriny, fa ara-dalàna marina orinasa. Na tompon'andraikitra mivantana amin'ny fividianana ireo rohy izy ireo na tsia novidian'ny orinasam-pivarotana motera fikarohana azy ireo… tsy fantatro. Fa mandoa izy ireo, ary ny vokatr'i Google dia voahodina noho izany.
Google dia nanamafy ny fanovana mahazatra ny algorithms. Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, Google dia nanamafy aza fa marika mavesatra be izy ireo. Natao hanatsarana ny fifandraisan'ny valiny ve izany? Sa ny hanandrana hiaro tena amin'ny fanafihana ataon'ny rindranasa mampifandray be karama mipoitra manerana ny tranonkala?
Eritreritra farany momba an'ity… Tsy azoko antoka fa hahasoa anao ny mandray vola noho ny rohy voaloa. Na dia azo atao aza ny manome anao de-index raha tratra ianao (izay tsy dia mitranga matetika loatra), manangona rohy mankamin'ny tranonkala ambany toerana ary, angamba, tsy misy fifandraisana mety hanimba ny laharan'ny tranonkalanao manokana. Ao amin'ny ohatra nasehon'ireo namako etsy ambony dia nanaiky izy fa latsaka ny pagerank fa tsy hitany ny antony.
Hitsahatra tsy handray karama amin'ny rohy ve izy? Mbola nilaza izy fa tsara loatra ny vola ka tsy haverina amin'izao fotoana izao.
Tags: fanovana rohygoogle adsenserohy mandoaboky seodoka rohy lahatsoratra
Ireo masoivoho dia mila an'ity boky ity amin'ny latabatra kafe
SEO: Ny maha-vokatra dia antsasaky ny ady ihany
21 Jun 2009 amin'ny 11:25 AM
Izaho dia manangana tranokala torohevitra sy tutorial momba ny WordPress, izay nisaina hatramin'ny volana Janoary. Manana lahatsoratra avo lenta 52 aho, ny sasany amin'izy ireo dia teny 2500+, ny atiny rehetra tany am-boalohany, mifamatotra ao anatiny avokoa mba hanomezana firafitra fitantarana matanjaka, ary samy manana rohy ivelany mivoaka no anton'izany rehetra izany (ny tranonkala rahateo).
Saika ny lahatsoratra rehetra dia misy atiny azo raisina, zavatra azon'ny mpamaky atao Dieny izao.
Na eo aza ny kalitao mahatalanjona, manodidina ny 2 amin'ireo lahatsoratra ireo no tafiditra ao amin'ny pejy 100 ambony ao amin'ny Google.
Izay tsy dia hiraharahiako loatra… afa-tsy ny 90% amin'ireo pejy ao amin'ny valiny 100 voalohany… dia fako maloto. Isa nomerika roa dia bilaogy spam.
Ankehitriny, amin'ny maha mpahay siansa ahy, dia zatra mijery aho.
Ny fahitako azy dia tsy manana fomba marina handrefesana kalitao na fahombiazan'ny mpamaky i Google.
Toy ny nolazaiko dia tsy mampaninona ahy izany fa ambany aho. Ny hen'akoho dia ny fisolokiana amin'ny bilaogy spam.
Misy hosoka ve?
Fantatro fa amin'ny tsena “mafana”, raha tsy hitan'i Google izany, ry mpanonta avo avo
ny fampahalalana momba ny kalitao dia tsy ho hita amin'ny alàlan'ny fikarohana organik. Na manompo ity
Google dia fanontaniana misokatra. Azo antoka fa tsy hanompo ny mpamaky izany.
Jun 21, 2009 ao amin'ny 11: 25 PM
Ny anao dia tantara hitako isan'andro, Dave. Ireo mpitory lehibe manana atiny misy kalitao dia tsy voatanisa. Ny atahorako, araka ny efa nosoratako tetsy ambony, dia ny fanodikodinam-bola ny rafitra rehetra amin'ny alàlan'ny paikady mampifandray karama. Mila drafitra hafa momba an'io i Google - ao anatin'izany ny fametrahana lanjany bebe kokoa amin'ny maha-zava-dehibe ny pejy fa tsy ny laza.
Jun 21, 2009 ao amin'ny 11: 36 PM
Raha izao no mitohy dia hanidy varavarankely mpandraharaha izy: tsy hahadio ny sakana tsy hidirana amin'ny asa mafy sy ny kalitao ny endasina kely. Avy eo dia niverina teo amin'izay niavianay avy isika.